Mpanamboatra PCB marobe | China Multilayer PCB Factory & mpamatsy
Saron-tava mena 14 sosona borosy mena
Ity dia takelaka boribory 14 sosona ho an'ny vokatra optronics. Ny PCB misy famaranana volamena mafy (rantsantanana volamena). Satria ny vokatra teknolojia avo lenta, ny fitaovana dia mampiasa Shengyi S1000-2 FR-4 (TG≥170 ℃). Ny saron-tava solder dia mena ary toa mamiratra.
16 layer PCB Multi BGA ho an'ny telecom
Ity dia tabilao fizarana 16 ho an'ny indostrian'ny fifandraisan-davitra. Ny haben'ny birao 250 * 162mm sy ny hatevin'ny PCB 2.0MM. Pandawill dia manome tabilao misy pirinty izay manome fitaovana marobe, lanja varahina, haavon'ny Dk, ary fananana mafana ho an'ny tsenan'ny fifandraisan-davitra miovaova hatrany.